पेटमा बोसो लाग्न थाल्यो ? त्यसो भए यी खानेकुरा खानुस्, पेटमा बोसो पगाल्नुस् ! – Khabaarpati
October 9, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on पेटमा बोसो लाग्न थाल्यो ? त्यसो भए यी खानेकुरा खानुस्, पेटमा बोसो पगाल्नुस् !
मृ’तक छोरीको शव गा’ड्’न गएका बुवाले जब माटोमै गा’डी’एको अर्को शिशु जिवितै भेटाए